ပြည်ပခရီးသွားရာဇဝင်မရှိသူတစ်ဦးနဲ.အိန္ဒိယပြန် တပ်မတော်သားတစ်ဦးမှာ ရောဂါပိုးတွေ.ရှိ - Yangon Nation News
ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ အမှတ် (၂၄၅) မှာ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဆိုက်ခေါင် ကျေးရွာ၌ အသွားအလာ ကန့်သတ် စောင့်ကြည့်နေသည့် အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားဖြစ်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ခရီးသွားရာဇဝင် မရှိသကဲ့သို့ COVID-19 ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သည့် ရာဇဝင်လည်း မရှိဘူးလို. သိရပါတယ်။
လူနာအမှတ် (၂၄၅) ဟာ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ဆုံဒေသတွင် ပခုက္ကူမှ အခြားသူများနှင့်အတူ လမ်းလုပ်ငန်း သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက် ပြန်လာသူဖြစ်ကာ ဆိုက်ခေါင်ကျေးရွာသို့ မေလ ၂၁ ရက်တွင် ပြန်ရောက်ပြီး ၎င်းအပါအဝင် မိသားစုဝင် ၆ ဦးလုံး Quarantine Center ၌ ဝင်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ကာ ကျန် ၅ ဦး၏ အဖြေမှာ ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခြင်း မရှိဘူးလို. သိရပါတယ်။
လူနာအမှတ် (၂၄၆) ကတော့ (၃)ကြိမ်မြောက်စစ်ဆေးရာမှ ပိုးတွေ့ရှိသူ အိန္ဒိယပြန် တပ်မတော်သား အရာရှိငယ်(၁)ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၉ ရက်တွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၅၃၇ ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၂၀၆ ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဌာန (မန္တလေး) (PHL – Mdy) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၁၈၈ ခုနှင့် ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၁၃၉ ခု၊ စုစုပေါင်း ဓါတ်ခွဲနမူနာ ၁၀၇၀)ခု အား စစ်ဆေးခဲ့ရာ လူနာအသစ် ၂ ဦး တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
သို့ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ယနေ့ ဇွန်လ ၉ ရက်၊ ညပိုင်းအထိ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ ၂၄၆ ဦး ရှိလာနေပြီး ၎င်းတို့အနက် ပြန်လည်သက်သာလာသူ ၁၅၉ ဦး ရှိကာ သေဆုံးသူ ၆ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။